Orylọ ọrụ ndị na-ebu wheel n'ịnyịnya - China Wheel Loaders Manufacturers, Suppliers
WIK20F Loader arụmọrụ parameters Nka na ụzụ oke oke Captain (ala nke ịwụ na ala) mm 553530 Engine Obosara (n'èzí wheel) mm 188010 cketwụ obosara (mm) 19005 Engine Elu (elu nke tagzi) (mm) 179010 Wheelbase (mm) 245015 Wheel Ẹtop (mm) 14805 Opekempe nwepu (mm) 2805 gosiri gosiri loadkgrated loading 2000 ọnụ ọnụ ịwụ ikikem3 1.0 mkpokọta weightkg 550030 Speed ​​nke ọ bụla gearKm / h 1Forward, akpa gia 90.5 2Forward, nke abụọ gia 221 1Step b ...
Uru WIK bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma na-adịgide adịgide: Okpokoro dị arọ, sistemụ ụgbọ ala a pụrụ ịdabere na ya, ogologo oge. Nnukwu arụmọrụ nke arụmọrụ: ike siri ike, ike na-ebili, nhazi akpaka, ọrụ njikọ, arụmọrụ dị elu nke forklift. Energy ịzọpụta aku na uba: ala ọsọ Weichai Steyr engine, nnukwu Ndahie abụọ mgbapụta confluence, oru oma ike ịzọpụta. Ọrụ dị jụụ: panoramic cab, ergonomic design, pilot njikwa, nnukwu oche. Advanced jụrụ usoro: mmiri okpomọkụ, oi ...
WIK867 wiil Loader
WIK Main nkọwa na odide nke WIK867 Loader mainfeature 1Full hydraulic pilot manipulation, fechaa mgbanwe, micro ezigbo nsonaazụ. 2Double mgbapụta confluence na-arụ ọrụ usoro, coaxial eruba adị steeringi, ike-azọpụta mmetụta bụ ịrịba ama. 3dvanced akpaka ịwụ ewepụghị ọrụ, ihe adaba mkpachapụ, belata ike osisi ike nke onye na-akwọ. 4Otinye aka na bọket na-arụ ọrụ nke ọma, na-adaba adaba karịa, belata ike ọrụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. 5ZSingle ...
WIK866 wiil Loader
WIK Main nkọwa na odide nke WIK866 loader mainfeature 1Full hydraulic pilot manipulation, fechaa mgbanwe, micro ezigbo nsonaazụ. 2Double mgbapụta confluence na-arụ ọrụ usoro, coaxial eruba adị steeringi, ike-azọpụta mmetụta bụ ịrịba ama. 3dvanced akpaka ịwụ ewepụghị ọrụ, ihe adaba mkpachapụ, belata ike osisi ike nke onye na-akwọ. 4Otinye aka na bọket na-arụ ọrụ nke ọma, na-adaba adaba karịa, belata ike ọrụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. 5ZSingle ...
WIK Main nkọwa na odide nke WIK948 Loader 1 Central articulated etiti, obere tụgharịa okirikiri, mobile na mgbanwe, mpụta kwụsie ike, ala nke na-arụ ọrụ na warara ohere. 2 Ngosiputa ihe di nfe igosiputara na ihe eji eme ihe na-eme ka makenya ugbo ala di nma ma di nma 3 Ikuku breeki haịdrọlik na 4 wiil sistemụ ma gwụchaa breeki ejiri ya na sistemụ breeki, nke nwere nnukwu breeki ma na - eme breeki siri ike na nchekwa dị elu 4 Full haịdrọlik sterịn, ike nnofega tr ...
WIK938 wiil Loader
WIK Nkọwapụta na njirimara nke WIK938 Loader 1 Etiti etinyere etiti, obere ntụgharị dịpụrụ adịpụ, mkpanaka na mgbanwe, nkwụsi ike dị n'akụkụ, ịdị mfe nke ịrụ ọrụ na oghere dị warara. 2 Ngosiputa ihe di nfe igosiputara na ihe eji eme ihe na-eme ka makenya ugbo ala di nma ma di nma 3 Ikuku breeki haịdrọlik na 4 wiil sistemụ ma gwụchaa breeki ejiri ya na sistemụ breeki, nke nwere nnukwu breeki ma na - eme breeki siri ike na nchekwa dị elu 4 Full haịdrọlik sterịn, ike nnofega tr ...
WIK936 wiil Loader
WIK Nke mbụ, uru ngwaahịa bụ Mba II. Nzipụ igwe,, onye ntụgharị ntụgharị,, meziwanye traction,, mmanụ ọkụ site na ihe ruru 5% Mee ka bọket, mụbaa arụpụta 12% · 18Mpa na-arụ ọrụ sistemụ hydraulic, rụọ ọrụ karịa ibu na, ibu ọrụ Nbudata ebugoro elu abawanyela na 3.1, nke ya na ZL50 nlereanya The ọhụrụ jụrụ usoro imewe, ihere okpomọkụ chọrọ nke -20 ka 43degrees Celsius The engine na-ruo eruo na ihe ọzọ, na-n'ihu mma tagzi, r ...
WIK836 wiil Loader
WIK Nke mbụ, uru ngwaahịa nwere ike ịdabere ma na-adịgide adịgide: sistemụ ụgbọ okporo ígwè tozuru etozu, okpokolo agba abụwo nkwenye ogologo oge, ndụ akụkụ akụkụ ahụ gbatịkwuru. Job arụmọrụ: Strong ịrị elu na traction, ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma. Energy-azọpụta aku: ebuli ala-ọsọ maqbx chekwebe, nnukwu displacement diversion haịdrọlik usoro, ike arụmọrụ. Ọrụ dị jụụ: ọ dị mfe ịrụ ọrụ, nlekọta ọkụ, mkpọtụ dị ala. Usoro dị elu dị elu: iji mmiri mee ka mmiri dị mma ...
WIK30F wiil Loader
Nrụ ọrụ WIK nke ZLJ30F loader Performance gosiri 3000kg n'ozuzu ibu 9600kg ịwụ ikike 1.8m3 kacha traction ike 97KN kacha breakout ike 127KN kacha ọkwa ogo ike 30 kacha mkpofu elu 2900mm kacha mkpofu iru 900mm n'ozuzu akụkụ (LWH) 731423502470mm kacha nta atụgharị okirikiri 5097mm Engine nlereanya LR6A3LR22 / 0920 ụdị okporo ígwè - * Ọ dịghị. nke cylinder-mụụrụ ọrịa strok 6 ...
WIK28F wiil Loader
WIK28F loader parameters Engine 1 、 Igwe na-adọkpụ ụgbọala na-eji British Ricardo Technology, ike siri ike, 2, Igwe ahụ na-ewepụta nzacha mmanụ, mmetụta nza ahụ dị mma, kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na oke ntụ ntụ; 3, iyuzucha usoro adopts gbawara-àmà ụdị, obere anwụrụ ọkụ, obere mmetọ, obere mkpọtụ, ezi gburugburu ebe obibi-echebe mmetụta, dị nnọọ mma maka na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'okpuruala coal m; 4, The mkpuchi nke engine ka nke elu-ike mpempe akwụkwọ metal, nke bụ str ...